PJ Taei Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na PJ Taei
PJ ndiye muvambi uye purezidhendi weUscreen, wese-mune-mumwe vhidhiyo monetization chikuva iyo inopa vhidhiyo vanamuzvinabhizimusi uye vagadziri kuita mari yavo yezvinhu uye kuvaka nharaunda dzinobudirira uye mabhizinesi akatenderedza mavhidhiyo avo.
Yekupedzisira Nhungamiro Yekutanga Chekunyorera Vhidhiyo Sevhisi
Chipiri, August 27, 2019 Chipiri, August 27, 2019 PJ Taei
Pane chikonzero chaicho chakanakira kuti Kunyoreswa Vhidhiyo Pakudiwa (SVOD) iri kuputika izvozvi: ndizvo izvo vanhu vanoda. Nhasi uno vatengi vazhinji vari kusarudza zvemavhidhiyo zvemukati izvo zvavanogona kusarudza nekutarisa pane zvavanoda, zvinopesana nekugara uchiona. Uye stats inoratidza kuti SVOD haisi kunonoka. Vaongorori vanofanotaura kukura kwayo kuti isvike mamirioni makumi maviri nemakumi maviri nemaviri ekuona chiratidzo muna 232 muUS. Global viewership inotarisirwa kuputika kusvika pamamiriyoni makumi mana neguru muna 2020, kubva pa411